Ukufundisa iiMitha zoMbane
Izixhobo zoMntu wonke
Izixhobo zokulinganisa ubude
Izixhobo zokulinganisa uMgangatho
Izixhobo zokulinganisa ixesha
Izixhobo zokulinganisa ubushushu
Izixhobo zeMathematika zePS
Izixhobo zeNzululwazi zePS
Izixhobo zeMathematics zeMS
Izixhobo zomzimba zeMS
Ukungcangcazela, ukuTshibilika, izixhobo zeThermology
Izixhobo ezingatshintshiyo nezangoku
Izixhobo zombane kunye nezixhobo zombane
Izixhobo zoMzimba zoMbane kunye neAtomic
Izixhobo zemichiza zeMS
Izixhobo zebhayoloji ze-MS
Imodeli yomntu yokwakheka
Izixhobo zeMS zeJografi
Izixhobo zokufundisa ngoMculo
Ngo-2014 i-65th Kunming National Exhibition Equipment Exhibition
ngomphathi ku 20-06-23
SIYAVULELA !! INKAMPANI YETHU INXAXHEBA NGO-2014
Ukurhweba ngokuNgena kunye nokuThumela iiRhwebo kumazwe angaphandle kweli. iwebhusayithi yenkampani yohlaziyo olubanzi
I-Lianying yokuThumela ngaphakathi kunye nokuThumela kumazwe angaphandle iCandelo lezoRhwebo, i-LTD yenkampani yewebhu yenkampani uhlaziyo olubanzi
Yueqing Lianying Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle
Yueqing Lianying Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Ltd, Co iya kufumaneka ngoMeyi, 2009. Inkampani yethu ukuze iseke kwaye iphuhlise ubudlelwane bethu beshishini kwihlabathi jikelele ukuze ubuhle ilizwe.
Inkonzo yeLianYing Inkampani
Ngokudityaniswa kwemarike yehlabathi, abathengi baphesheya nangaphezulu bayangenisa zonke iintlobo zeemveliso ezivela e China. Kwaye i-China njengelizwe elikhulu elivelisayo lesixhobo semfundo sehlabathi, iphuma kusilelo kwiinkalo ezithile. Thatha umzekelo, ukusasazeka kwamashishini avelisayo ...
Ukuxoka nothando lwesikolo seendawo ezichaphazeleke yinyikima
Inkampani yeLianying iphendula kwisindululo se-aseismatic esazalwa nge-15th, ngoMeyi 2008, esenziwe yiChina Isixhobo sezeMfundo kunye nezixhobo. Emva kwebhodi yabalawuli, unikezele ngeempahla ze-aseismatic kwisikolo seentlekele kwi-5.12 WenChuan Earthquake. Inkampani yokuLungisa iZiko leMfundo ...
Kufuneka ube ukusukela kwethu!
Ngaba awonelanga ngokwazi ngesixhobo sezeMfundo? Ngaba unayo nayiphi na imibuzo malunga nomgangatho weSixhobo sezeMfundo? Thatha ifowuni yakho, unkqonkqoze ikhibhodi yakho, uqhakamshelwano nathi ngoku! Siza kukunceda uthenge isiXhobo sezeMfundo eso mgangatho kunye nexabiso lilonke. Iya kuthumela t ...
I-WenZhou LianYing Teaching Instrument Co, i-LTD Inkampani ngumvelisi obambe iglobhu ekhokelayo yezixhobo zokufundisa. Ukusukela i-china ingena kwi-WTO, kunye nokukhawuleza kunye nokulula kolwazi lwe-Intanethi, ukuhlala kweemveliso zale nkampani kuya kwanda kwimakethi yomhlaba. Ukongeza, ...
Umgaqo wethu: -Nxulumana neMfundo- —— -Zinikele kuluntu ——-
Umncedisi wewebhusayithi yesiXhobo seTianying Teaching ungene phesheya kolwandle.
Umncedisi wewebhusayithi yesiXhobo seTianying Teaching ungene phesheya kolwandle. Ngokwenene le yinto ekufanele ukuba uyibhiyozele. Ngophuhliso olukhawulezayo lwetekhnoloji yenethiwekhi, i-Lianying ixhomekeke kuyo ukukhonza abathengi ngcono. Ukongeza sinethemba lokuba singatyhala "i-21st Century Functional Classroom" kwi-g ...
Icandelo leNkampani yeLianying Enterprise
Imfundo yeLianying kunye neTekhnoloji Co., Ltd.
YueQing yokuLuanying Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
Indawo yoPhuhliso lwezoQoqosho kunye neTekhnoloji yeWenzhou yeFektri yeChroniki yokuFunda yezixhobo